Nanolabs Blog - We love taking products from vision to reality.
WEBSITE ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်အချက်တွေ လိုအပ်ပါသလဲ?
Website ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်အချက်တွေ လိုအပ်သလဲဆိုတာ သိကြပါသလား? Well-Designed Websites တွေက Business Owners တွေ Entrepreneurs တွေအတွက် brilliant ဖြစ်တဲ့ marketing platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ talented customer တွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်အောင်လို့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် Websites တွေမှာရှိသင့်သည့်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ 1. User-Friendly Website Navigation Website ကောင်းတစ်ခုအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေမယ့် Navigation Guide တစ်ခုရှိရပါမယ် ။ Customers တွေ ဝယ်ယူရ လွယ်ကူချောမွေ့ စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့် Websiteရဲ့ အပြင်အဆင်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနှင့် well-organized ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Search Bar၊
အလှကုန် လက်လီ၊လက်ကားဆိုင်မှတစ်ဆင့် E-commerce ဘက်ကို ပြောင်းလဲလာတဲ့ U Bo Aye Cosmetics
U Bo Aye Cosmetics လုပ်ငန်းကို ဘာကြောင့် စလုပ်ဖြစ်တာလဲ။ အဖိုးအဖွား လက်ထက်ကတည်းက လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဝါသနာပါတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ဦးစီးပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Nanolabs ကုမ္ပဏီနဲ့ လက်တွဲပြီး Mobile Application စလုပ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်း။ U Bo Aye Cosmestics က မန္တလေးမှာ လူသိများပြီးသား အလှကုန် လုပ်ငန်းဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ နည်းပညာတိုးတက်လာတော့ အားလုံးက အွန်လိုင်းကနေပဲ စျေးဝယ်တာကအစ လုပ်လာကြတာ သတိထားမိပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဦးဘိုအေး အလှကုန်ဆိုင်က ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဖုန်းကနေ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Mobile Application ကနေတဆင့်
၁. စောစောထပါ ပုံမှန်ရုံးသွားရမယ်ဆို ရုံးချိန်မှီအောင် လုပ်ရတဲ့အတွက် စောစောထဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေကုန် လန်းဆန်းပြီး Productive ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ရုံးသွားဖို့ အချိန်ယူစရာ မလိုတဲ့အတွက် နောက်ကျမှ အိပ်ရာထပြီး Computer ရှေ့မှာ Meeting ထိုင်နေပေမယ့် အရင်လို လန်းဆန်းတက်ကြွမှုမျိုး ရှိမနေနိုင်ပါဘူး။ ၂. အလုပ်လုပ်မယ့် နေရာကို သေချာပြင်ဆင်သင့်ပါတယ် ကိုယ်အလုပ်ထိုင်လုပ်မယ့် စားပွဲနေရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒါမှသာ စိတ်က လန်းဆန်းပြီး တစ်နေကုန် တက်ကြွနေမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ဖြစ်သလိုမဝတ်ပဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဝတ်စားပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Online Meeting လုပ်ခါနီးမှ
“ကဲ ….. Demo ပြဖို့ အားလုံးအသင့်ပဲလားဟေ့” “ဟုတ်ကဲ့ နေ့လည်လောက်ဆိုရင်တော့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ ” “ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ။မနေ့ကတည်းက အားလုံးပြီးနေပြီ မဟုတ်လား။” “ဟုတ်ပါတယ်။ Code တစ်ချို့ပြင်လိုက်မိတာ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ပြန်စစ်နေတာခင်ဗျ” “ဟာ …..ပြဿနာပဲကွာ။ဘာလို့ အခုချိန်ကျမှ ပြင်တာလဲ။ဒီနေ့ Demo ပြမယ်လို့ ပြောထားပြီးပြီ။နဂို အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတိုင်း ပြန်ထားလိုက်လေ။” “ဟုတ်ကဲ့ ….. နဂိုအတိုင်း ပြန်ထားပြီးပြီ။ ဒါလည်းအလုပ်မလုပ်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး။” “ခက်တာပဲကွာ။တော်သေးတာပေါ့၊အရင် version တွေ ငါသိမ်းထားမိလို့။ Share Folder ထဲကို ဝင်ပြီး အရင် version ကိုယူလိုက်။” “share folder ထဲမှာတွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် project-latest, project-update, project-final,
သင်က Tech အကြောင်း သိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် သင့်အနီးအနားမှာ Tech Consultant တစ်ယောက် ရှိမယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ သုံးထားတဲ့ နည်းပညာကို အချိန်တိုတွင်းသိနိုင်မှာပါ။ ပထမဦးဆုံး လုပ်ရမှာက သူတို့ သုံးထားတဲ့ နည်းပညာကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? သင်လုပ်ချင်တဲ့ Project ကို သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ Customize ရေးဆွဲပေးနိုင်လဲဆိုတာ တိုင်ပင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Projects တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု မတူတဲ့အတွက် သင်ကြိုက်တဲ့ Software Company တစ်ခုစီမှာ သင်လုပ်ချင်တဲ့ Project အတွက် အရင်က Experience မရှိတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက ကြည့်ရမှာက သူတို့ ဘယ်လို နောက်ဆုံးပေါ် Languages တွေ Framework တွေ
Software Company တစ်ခုကိုဘယ်လို outsource လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၁) Software Company တစ်ခုရှာရတာ အရမ်း Challenging ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံတွေ အချိန်တွေရင်းထားရပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Result ထွက် မလာရင် ငွေကုန် လူပင်ပန်း ၂ ခါမောဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် Software Company ကို သေချာ Outsource လုပ်နိုင်ဖို့ လမ်းညွန်ပေးချင်ပါတယ်။ Stage One: Basic Research သင်က IT Firm တစ်ခု ကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုပါစို့ ၊ တစ်ခု က Expertise ကောင်းကောင်း ရှိတယ်။ Experience မရှိဘူး။ တစ်ခုက Projects တွေ
ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ ဈေးရောင်းဖို့က အဓိကအရေးပါတာလား။ ဈေးရောင်းတာ အရေးပါတာပေါ့ အပိုဝင်ငွေတွေ အမြတ်တွေရချင်လို့ပဲ ဈေးရောင်းနေကြတာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးပဲအတင်းထိုးရောင်းတော့မှာလား? အဲ့ဒါဆို များများရောင်းနိုင်လေ မြတ်လေလား မေးစရာဖြစ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းမဖြေခင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် customer ဘက်က တချက်လောက်စဉ်းစားကြမယ်နော်။
Website အဟောင်းတွေကို update မလုပ်ပဲထားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ မရင်းနှီးသေးတဲ့ customer တစ်ယောက်က Company တစ်ခု၊ Business တစ်ခုကို အကြောင်းကို သိချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဝင် checkမှာက အဲ company ရဲ့ Website ပါပဲ။ အဲလိုဝင်ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့် Website က end date design တွေ ၊အရင်တုန်းက data အ ဟောင်းတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် customer အ နေနဲ့က company ကို ယုံကြည်မှု လျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။